Laanta Shaqaalaynta iyo Isdhexgalka cusub | Somaliska
Ka bilaabta 1da bisha December 2010 ayaa hawlaha isdhexgalka waxaa la wareegi doonaa Laanta Shaqaalaynta Sweden (Arbetsförmedlingen) taasoo macnaheedu yahay in qofka sharciga qaata ay arimihiisa qaban doonto Laanta Shaqaalaynta sida in shaqo loo raadiyo, lacagta qofka la siiyo ayadoo qorshaha cusub uu ku saleysan yahay shaqaalayn deg deg ah iyo xoriyada doorashada ee shaqsiyaadka. Isbadalka cusub ayaa waxaa ka mid ah qofka in hawshiisa ay qaban doonaan shirkado madax banaan oo la shaqeeya Laanta Shaqaalaynta kuwaasoo lagu amaal marin doono sida adiga ay kuu suuq geeyaan oo shaqo kuugu helaan. Sidoo kale qorshaha cusub ayaa waxaa ka mid ah in qofka waxbarashadiisii iyo qibradiisii hore loo tix galiyo ayadoo uu sheegay wasiirka isdhexgalka in markii hore ay u arkeen dadka soo galootiga ah kuwo daciif ah balse hada arintaas ay isbadashay. Sidoo kale isbedelka ugu wayn ayaa ku dhici doono lacagta la qaado ayadoo dhamaan wadanka Sweden laga qaadan doono lacag isku mid ah. Isdhexgalka cusub ayaa walow aysan qeexin Laanta Shaqaalaynta balse uu ii sheegay mid ka ah shaqaalahooda saameyn doona dadka cusub ee kamuunada yimaada wixii ka bilowda 1da bisha december, dadkaas waa in da'doodu u dhaxeysaa 20 ilaa 65 jir ayadoo dhalinyara 18jir ka wayn balse aan waalidkood la socon xitaa uu qaban doono sharciga. Balse sharcigaan cusub guud ahaan kama saarayo hawlihii Kamuunada meesha ayagoo wali ka masuul ahaan doona SFIga, caafimaadka, guryaha iyo caruuta.
Ka bilaabta 1da bisha December 2010 ayaa hawlaha isdhexgalka waxaa la wareegi doonaa Laanta Shaqaalaynta Sweden (Arbetsförmedlingen) taasoo macnaheedu yahay in qofka sharciga qaata ay arimihiisa qaban doonto Laanta Shaqaalaynta sida in shaqo loo raadiyo, lacagta qofka la siiyo ayadoo qorshaha cusub uu ku saleysan yahay shaqaalayn deg deg ah iyo xoriyada doorashada ee shaqsiyaadka.
Isbadalka cusub ayaa waxaa ka mid ah qofka in hawshiisa ay qaban doonaan shirkado madax banaan oo la shaqeeya Laanta Shaqaalaynta kuwaasoo lagu amaal marin doono sida adiga ay kuu suuq geeyaan oo shaqo kuugu helaan.
Sidoo kale qorshaha cusub ayaa waxaa ka mid ah in qofka waxbarashadiisii iyo qibradiisii hore loo tix galiyo ayadoo uu sheegay wasiirka isdhexgalka in markii hore ay u arkeen dadka soo galootiga ah kuwo daciif ah balse hada arintaas ay isbadashay.
Sidoo kale isbedelka ugu wayn ayaa ku dhici doono lacagta la qaado ayadoo dhamaan wadanka Sweden laga qaadan doono lacag isku mid ah.
Isdhexgalka cusub ayaa walow aysan qeexin Laanta Shaqaalaynta balse uu ii sheegay mid ka ah shaqaalahooda saameyn doona dadka cusub ee kamuunada yimaada wixii ka bilowda 1da bisha december, dadkaas waa in da’doodu u dhaxeysaa 20 ilaa 65 jir ayadoo dhalinyara 18jir ka wayn balse aan waalidkood la socon xitaa uu qaban doono sharciga.
Balse sharcigaan cusub guud ahaan kama saarayo hawlihii Kamuunada meesha ayagoo wali ka masuul ahaan doona SFIga, caafimaadka, guryaha iyo caruuta.
ku dhufo ka dhaqaaqa says:
haaaaaaaaaaaaaa sidaas ayaa fiican hadii lagu wadaayo dhamaan waa wax usoo kordhay dadka soo galootiga ah
awes maxamad cadow says:
December 1, 2010 at 21:38
haaaaaaaaaaaaa, waxaan qabaa aniga inaytahay maskax caafimad qabta loona baahnaa mar hore in lashaqalysiiyo bulshada laga tirada badanyahay ee soogalotiga ah si loo ogaado xaqiiqada waxsoo sarkoda dhabta ah. waana soo dhaweyneynaa marwalba sacaba furan…sharaftu waa shaqo.,,, shaqaduna waa nolosha,,, ,,